लकडाउन लभ र एयरहोस्टेस उपन्यास निकाल्ने तयारीमा छु : प्रियासन | Indrenionline.com
लकडाउन लभ र एयरहोस्टेस उपन्यास निकाल्ने तयारीमा छु : प्रियासन
पश्चिम नेपालको दाङमा जन्मिएर दाङलाई नै पत्रकारीताको कर्मथलो बनाएका पत्रकार सविन प्रियासन दाङबासीको लागि कुनै नौलो नाम होइन । पत्रकारिताका अलावा समाजका हरेक गतिविधिहरुमा जोडिने हरकोही संग पनि प्रियासनको नाम परिचित छ । दाङ मै पत्रकारिताको कर्मथलो बनाएपनि पत्रकारिताको केन्द्रमा नै दख्खल राख्ने पत्रकार प्रियासनको नाम पछिल्लो समय दाङ मात्र नभएर केन्द्र मै चिरपरिचित छ । नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखाका अध्यक्ष, प्रेस संगठन प्रदेश नम्वर ५ को संयोजक, गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिकको प्रकाशक सम्पादक समेत रहनु भएका प्रियासनले पत्रकारिताको नेतृत्व गर्नुका साथै पछिल्लो समयमा साहित्य लेखनमा समेत अग्रसन छन् । सामाजिक बिषयबस्तुमा आधारित ८ वटा उपन्यास र दुईवटा अन्य कृतिहरु बजारमा लिएर आएका साहित्यकार/ पत्रकार प्रियासन हाल साहित्य सृजनामा नै ब्यस्त छन् । पछिल्लो समय एयरहोस्टेस र लकडाउन लभ उपन्यास लेखिरहेका प्रियासनाले एकैसाथ दुई उपन्यास प्रकाशन गर्ने तयारीमा छन् । प्रस्तुत छः सामाजिक कार्यहरुमा समेत अग्रस्थानमा देखा पर्ने प्रियासनसँग साहित्यीक गतिविधिहरुमा आधारित रहेर गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
लकडाउनको समयमा यहाँको दिनचर्या कसरी अगाडी बढिरहेको छ ?
यतिबेला सिंगो विश्व नै कोरोना भाइरसको संक्रमण संग लडिरहेको छ । यस्तो बिकराल अवस्थामा अनावश्यक बाहिर निस्कनु भन्दा घरमै बस्न राम्रो हुन्छ । पेशागतरुपमा म बाहिर निस्कनुपर्ने भएकाले सामाजिक दुरी कायम गरेर, स्वास्थ्य सामग्रीहरु प्रयोग गरेर काममा खटिन्छु । आजकाल विशेष गरी पत्रकारिताको नेतृत्व गरिरहेका हिसाबले विभिन्न वैठक, छलफल, योजनाहरु बनाउँनुका साथ साँगठनिक अन्य जिम्मेवारीहरु पुरा गर्दागर्दै दिनहरु बित्ने गर्छन् ।
तपाई यस अवधिमा साहित्य लेखनमा पनि क्रियाशिल भएको कुरा तपाईको फेसबुक स्टाटसबाट जानकारी लिन पाइन्छ । कुन पुस्तक निकाल्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ?
हो मेरो शोख पत्रकारिता मात्र नभएर साहित्य सृजना पनि हो । त्यसैले मैले पहिले देखि नै साहित्य सृजना गर्ने गरेको छु । र यतिबेला लकडाउन लभ उपन्यास लेखेर मिलाउने क्रममा छु । लकडाउन सकिएपछि लकडाउन लभ अनि एयरहोस्टेस उपन्यास निकाल्ने तयारी गरिरहेको छु ।
शीर्षक नै लकडाउन लभ ? ओ हो यसमा कस्तो कथा बस्तु समेटिएको छ ?
लकडाउन लभमा कोरोनाकालको समयमा सिर्जित घटनाक्रमहरु नै समावेश छन् । यसमा माया प्रेमका कुराहरु मात्र नभएर कोरोनाका कारण सिर्जना भएका अफ्ठ्याराहरु, यसबाट बच्ने उपाएहरु अनि लकडाउनका कारण उत्पन्न भएका आर्थिक मन्दि अनि यसबाट बच्ने उपाएका कुराहरु पनि छन् । लकडाउन लभ उपन्यासमा समाजमा प्रत्यक्ष असर गरेका थुप्रै घटनाक्रमहरु जो यस अबधिमा घटेका छन् । ती विषय बस्तुहरु पनि कथात्मक शैलिमा यसमा समावेश गरिएको छ ।
तपाई धेरै क्षेत्रमा क्रियाशिल हुनुहुन्छ । संस्थागत नेतृत्व पनि गरिरहनुभएको छ । कतिबेला समय निकाल्नुहुन्छ लेख्नका लागि ?
समय भन्ने कुरा व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो । यहाँले भने झै म संस्थागतरुपमा जति पनि ठाउँमा आबद्ध छु, नेतृत्वदायि भूमिकामा छु । यस अर्थ सबैलाई परिचालन गर्ने सवालमा म अलि बढि व्यस्त नै हुन्छु । यस अबाहेक लेखन कार्यको कुरा गर्दा भित्रैबाट कुनै कुरा गर्छु भन्ने हो भने गर्न सकिदो रहेछ । विशेष गरी म अफिसमा भएको समयमा एकछिन् भएपनि डेसटप कम्प्युटरमा बस्न पाउँदा किताल लेखन कार्यलाई अगाडी बढाउँछु ।
मानिसहरु किताब लेख्नका लागि महिनौ समय निकालेर एकान्त ठाउँमा जान्छन्, तपाई अफिसमा लेख्छु भन्नुहुन्छ, अलि समस्या हुँदैन ?
म लेख्न बस्दा जस्तोसुकै होहल्ला भएपनि मलाई त्यसले कुनै असर गर्दैन । यहाँले भने झै दिनभरि किताब नै लेख्न नपाउँने भएकाले किताब भित्रका पात्रहरुको नाम टाइप गर्न बनाइएको फाइलको छेउँमा लेखेको हुन्छु, यस्तो गर्दा कहिले काँही पात्रहरुको नाम बिर्सदा सच्चाउन काम लाग्छ । जसले गर्दा किताब लेख्न सुरु गरेपछि आफूलाई यी र यस्ता कुराहरुमा बढि सजग बनाउँछु । अहिलेसम्म अफिसमै उपन्यास लेखिरहेको छु । खासै समस्या भएको छैन ।
लकडाउन लभ भन्नासाथ मायाप्रेम, समाजको वर्तमान अवस्था त भैहाल्यो, यस बाहेक यौन मनोविज्ञानलाई यहाँले कत्तिको महत्व दिनुभएको छ ?
यो बुक यहाँले भने जस्तै प्रेम, समाज अनि वर्तमान परिवेशमा आधारित छ । यसहिसाबले यसमा यौनमनोविज्ञानका कतिपय प्रसँगहरु समावेश छन् । अन्य पुस्तकको तुलनामा मैले यसमा यौन मनोविज्ञानको प्रसँग अलि बढि समावेश गरेको छु ।
पाठकले कहिलेसम्म लकडाउन लभ र एयर होस्टेस उपन्यास पढ्न पाउँछन् ?
सम्भव त: अषाढको अन्तिमसम्म मैले यसलाई बजारमा ल्याउने तयारी गरेको छु ।
म सम्पूर्ण शुभेच्छुक पाठकहरुलाई विगतमा जस्तै मैले प्रकाशन गर्न लागिरहेको लकडाउन लभ र एयर होस्टेस उपन्यासलाई पनि माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु ।
२६ जेष्ठ २०७७, सोमबार १५:५०
Previous: दिल्लीमा मृत्यु भएका दाङका एक व्यक्तिमा कोरोना पुष्टि
Next: भरतपुरमा कोरोना सङ्क्रमित एक बृद्धको मृत्यु
एक हजार निजी विद्यालय बन्द हुन अवस्थामा
न्यायमा अस्थिरता : स्वेच्छाचारी नियुक्ति गर्ने अध्यादेशविरुद्धको रिट ३५ दिनसम्म सुनुवाइ भएन
७ माघ २०७७, बुधबार ०८:३६
ओली सरकारले बढायो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य
५ माघ २०७७, सोमबार २०:५८
समाचार संग्रह Select Month January 2021 (68) December 2020 (128) November 2020 (150) October 2020 (192) September 2020 (296) August 2020 (337) July 2020 (217) June 2020 (109) May 2020 (155) April 2020 (147) March 2020 (87) February 2020 (135) January 2020 (142) December 2019 (148) November 2019 (141) October 2019 (77) September 2019 (143) August 2019 (136) July 2019 (105) June 2019 (86) May 2019 (133) April 2019 (85) March 2019 (171) February 2019 (160) January 2019 (226) December 2018 (225) November 2018 (177) October 2018 (177) September 2018 (233) August 2018 (241) July 2018 (243) June 2018 (245) May 2018 (223) April 2018 (239) March 2018 (429) February 2018 (431) January 2018 (421) December 2017 (377) November 2017 (375) October 2017 (242) September 2017 (226) August 2017 (402) July 2017 (411) June 2017 (421) May 2017 (385) April 2017 (249) March 2017 (434) February 2017 (457) January 2017 (688) December 2016 (769) November 2016 (863) October 2016 (729) September 2016 (1056) August 2016 (1104) July 2016 (989) June 2016 (456) May 2016 (354) April 2016 (234) March 2016 (53)